के महिलाहरु साँच्चै चाहनुहुन्छ मा एक सम्बन्ध छ ।
पाठक नोट: निम्न पोस्ट छ बारे अझै एक अधिक महंगा ब्लब वैज्ञानिक अनुसन्धान. प्रश्न ‘के महिलाहरु साँच्चै चाहनुहुन्छ.’ केही मानिसहरू जवाफ हुनेछ, ‘पैसा,’ अरूलाई हुनेछ ‘जवाफ जो नरक थाह छ । र ती को एक अधिक तुला जवाफ हुनेछ, ‘सात इन्च वा बढी. ‘पाठक टिप्पणी: जीवन मा सडक खण्ड हाल पोस्ट मा एक टिप्पणी ‘को विश्वव्यापी तातो पागल म्याट्रिक्स: एक मानिस गरेको गाइड गर्न महिला । ‘त्यो याद छ भएकोले, त्यसपछि यो रहेको छ सम्म र दूर उनको सबैभन्दा लोकप्रिय पोस्ट गर्न मिति संकेत, उनको या त एक गम्भीर चासो मा पुरुषहरु भाग बुझ्न महिला वा एक गम्भीर छ भन्ने विश्वास तातो महिला पागल हो । यो पोस्ट गर्न सेवा सक्छ. यहाँ जान्छ पोस्ट संग: एक अध्ययन मा प्रकाशित व्यक्तित्व र सामाजिक मनोविज्ञान बुलेटिन हालै कि फेला गर्दा मानिसहरू थिए आकर्षित गर्न राम्रो- महिला मा बैठक, तिनीहरूलाई महिला महसुस गरेनन् नै बाटो बारेमा मानिसहरू । विश्वविद्यालय देखि शोधकर्ताओं को रोचेस्टर, इलिनोइस विश्वविद्यालय मा अर्बाना-च्यामपियन र सेन्टर (आईडीसी) इस्राएलका एक सम्भव संयन्त्रको किन व्याख्या महिला र पुरुष मा फरक आफ्नो यौन प्रतिक्रिया संग विपरीत-सेक्स अपरिचित । हामीलाई यहाँ रोक्न लागि एक पल र सम्झना भनेर आफैलाई भर समय, धेरै महिलाहरु आकर्षित भएका छन् ‘खराब केटा । ‘यो खराब केटा छ मूर्त द्वारा मोटरसाइकल- छ जो अधिक टैटू भन्दा मस्तिष्क कक्षहरू. चलचित्र जस्तै,’ ‘शनिबार रात, ज्वरो’ र ‘को जंगली एक’ महिमा को आफ्नै संस्करण खराब केटाहरू छ । नमुना यस्तै छ: खराब केटा (वास्तवमा अधिक भ्रमित गलत दयनीय भन्दा खराब) तातो साँच्चै साँच्चै तातो तातो र एक ठूलो नर्तकी हुन् । राम्रो केटी संग प्रेम मा पतन उहाँलाई खोजी, कि अन्त मा आफ्नो कमीकमजोरी पनि धेरै छन् ह्यान्डल गर्न छ । त्यो फिर्ता जान्छ जहाँ त्यो आए र बिहे एक यहूदी दन्त चिकित्सक. अब फिर्ता गर्न अनुसन्धान: एक सय र बाह्र स्नातक विद्यार्थी थिए समान रूप विभाजित पुरुष र महिला बीच, र सहभागीहरू थिए जोडी अनियमित संग एक विपरीत-सेक्स व्यक्तिगत तिनीहरूले थिएन पहिले भेट. अध्ययन जांच यौन चासो र सहभागीहरू’ भावना को संभावना मा दीर्घकालीन डेटिङ संग आफ्नो नयाँ ‘साझेदार,’ र कसरी ती जोडिएको आफ्नो धारणा को एक व्यक्तित्व गुण अध्ययन भन्छ ‘प्रतिक्रिया छ । ‘रूपमा नेतृत्व शोधकर्ता, यो राखे, ‘यौन इच्छा मौलाउने बढ्दो सम्बन्धले र उत्तरदायी हुनुको छ, एक सबै भन्दा राम्रो तरिका को ठप्प बसाल्न गर्न यो छल्ने अनुभूति समय छ । ‘तर के शोधकर्ताओं फेला थियो राम्रो अचम्मको. पुरुष फेला उत्तरदायी महिला बढी महिला र आकर्षक छ । जब महिलाहरु सामना एक उत्तरदायी मानिस, तिनीहरूले थिए कम आकर्षित गर्न भनेर व्यक्ति । ल्याउन यो तल एक अधिक आधारभूत स्तर लागि ती पाठकहरु छन् जो खाने तिनीहरू हुन्, जबकि यो पढेर: एउटा सुरुमा मुठभेड, पुरुष मन पर्यो राम्रो महिला । महिला सोचे राम्रो पुरुष थिए. दोस्रो अध्ययन आवश्यक सहभागीहरू संग संलग्न गर्न, या त एक उत्तरदायी वा अनुत्तरदायी व्यक्ति को विपरीत सेक्स, त्यसपछि तिनीहरूलाई अन्तरक्रिया अनलाइन जबकि विवरण एक वर्तमान समस्या मा आफ्नो जीवन । यहाँ लक्ष्य थियो हटाउनुहोस् गर्न संभावित उलझाने तत्व प्रत्यक्ष को सामाजिक बातचीत (हँसिला, शारीरिक) तिनीहरूले भने हेर्न सक्छ कसरी अलग धेरै प्रतिक्रिया वा राम्रोपन मा खेलेको आकर्षण छ । फेरि, मानिसहरू मा अध्ययन लाग्यो उत्तरदायी र ध्यान दिएर महिला थिए अधिक आकर्षक रूपमा संभावित साझेदार जबकि, महिला फेला मानिसहरू ती नै लक्षणहरु केहि हुन, तिनीहरूले मा कदम र यो फँस को तल आफ्नो जूता । तेस्रो र अन्तिम अध्ययन प्रस्तुत कागज मा खोजे परीक्षण गर्न विशेष छ कि संयन्त्रको जो द्वारा ‘उत्तरदायित्व’ उत्प्रेरित व्यक्तिहरूलाई पछि लाग्न सम्बन्ध थियो, वास्तवमा, यौन इच्छा छ । त्यसो गर्न, तिनीहरूले प्रतिकृति को दोस्रो अध्ययन, तर जोडी एक विशिष्ट उपाय यौन आकर्षण छ । तिनीहरूले त्यसपछि फेला जब कि पुरुष पाइएन महिला उत्तरदायी हुन, यो नेतृत्व गर्न एक चरम यौन इच्छा मानिसहरूको बीचमा छ । कि, बारी मा नेतृत्व गर्न ठूलो इच्छा को लागि एक सम्बन्ध छ । एउटै परिणाम: पुरुष फेला प्रतिक्रिया हुन यौन मनमोहक छ । महिला राखिएको उनको जाँघिया ठाउँ दृढ छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले अझै पनि अनिश्चित किन महिलाहरु कम यौन आकर्षित गर्न उत्तरदायी अपरिचित मानिसहरूको भन्दा । तिनीहरूले सिद्धान्त छ । मा सिद्धान्त छ । बचत गर्न सक्नुहुन्छ यी शोधकर्ताओं को एक धेरै समय र समस्या छ । त्यो उनको आफ्नै सिद्धान्त छ किन रूपमा धेरै महिला छन् आकर्षित गर्न खराब छल्ने नता पुरुष.
उहाँले रुचि, सबैलाई सही । पीतल घन्टी रही छ, कसैले जस्तै जो तपाईं उपलब्ध छैन वा पुग्न सकिने छ । उहाँले सवारी मा एक मोटरसाइकल मा वा हिँड्नुभएको मा विवाह लगाएका लिएर आफ्नो. उहाँले गरेको डरलाग्दो र खतरनाक र ठ्याक्कै के आमा हामीलाई यस्तो चेतावनी दिनुभयो । र हामी सही त्यहाँ जान. लक्ष्य, को पाठ्यक्रम, छ कि उहाँले प्रेम पर्नु हुनेछ अमेरिकी र रोक्न सवार बाइक वा विवाह लगाएका दल वा हुनेछ सुरु लिएर आफ्नो. अर्को शब्दमा, हामी परिवर्तन हुनेछ बन्न उहाँलाई जस्तै अधिक मानिसहरू हामी थिएनन् आकर्षित गर्न पहिलो स्थानमा छ । सबैभन्दा महिला महसुस पहिले पनि लामो छ कि सायद यो खराब केटा थिएन यस्तो एक राम्रो विचार पछि सबै, र तिनीहरूले संग अन्त राम्रो मानिस । अरूलाई बनाउन एक क्यारियर पछि, खराब केटा, सामान्यतया संग पूर्वानुमान परिणाम । एक सानो संख्या अन्त संग खराब केटा, जो साँच्चै गर्छ सुनको हृदय, र कुनै सम्बन्ध गर्दछ । एक धेरै, धेरै सानो नम्बर छ । हलिउड र वास्तविक जीवन मा, यी खराब केटा जसले राम्रो बनाउन के, त्यसैले किनभने तिनीहरूले अन्तमा उमेर पुग्न जो तिनीहरूले बस पनि थकित जारी गर्न.
तल बसोबास हुन्छ सबै तिनीहरूले सक्षम छन्
बधाई छ विवाह मा, जर्ज । यो प्रश्नको जवाफ ‘के महिलाहरु साँच्चै चाहनुहुन्छ.’ भन्ने छ, अन्ततः, हामी गर्न चाहनुहुन्छ सबै प्रेम र कदर गर्न । हामी बस लिन सक्छ विभिन्न बाटो त्यहाँ प्राप्त गर्न वा त्यहाँ प्राप्त कहिल्यै. भाग्यशाली, हामी गिर सक्छ धेरै बन्द मोटरसाइकिल को प्रक्रिया मा छ । हामी भने छन्, हामी बन्न सक्छ साँच्चै उस्तै नर्तकियों
← अनलाइन डेटिङ
कसरी गर्न सक्छन् एक चिनियाँ केटी पाउन एक फ्रान्सेली प्रेमी मा फ्रान्स । डेटिङ फ्रान्स साइट →